အတိုင်းအတာ အပိုင်းအစ ရေတွက်ခြင်း အမျိုးအစား
ဖြတ်တောက်ခြင်းအမျိုးအစား Zigzag cutter သို့မဟုတ် Straight cutter
တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ အလျားလိုက် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း- လိုင်း သို့မဟုတ် စိန်အမျိုးအစားဒေါင်လိုက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း- လိုင်း သို့မဟုတ် စိန်အမျိုးအစား
အရှိန် 40-60bag/min (ထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်.)
အိတ်အရွယ်အစား W:30-100mm၊ L:30-150mm(ချိန်ညှိနိုင်သော)
စက်အလေးချိန် 190 ကီလိုဂရမ်
စက်ရုပ် ထိတွေ့ပစ္စည်း- SS304စက်ခွံ: SS304
1.Big LCD interface၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်။
2.Numerical Controlled အိတ်အရှည်၊ အသုံးပြုသူဖော်ရွေပြီး တိကျသောအိတ်အရွယ်အစား
3. အရောင်-ကုဒ်ခြေရာခံခြင်းကို သတ်မှတ်ရန် ခလုတ်တစ်ခု၊မိမိကိုယ်ကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အမှားများ၊မြင့်မားသောတိကျသော cursor;ဓာတ်ပုံ-လျှပ်စစ်အာရုံခံကိရိယာအတွက် တောင်းဆိုမှုနည်းပါးခြင်း၊ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်သက်သာတယ်။
4.Smart ထိန်းချုပ်မှု။စက်ရပ်သွားသောအခါတွင်၊ Thermal Sealers များသည် ပွင့်နေပါသည်။
5.အရောင်ကုဒ်ခြေရာခံမုဒ် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်အရှည်မုဒ်အောက်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ကျိုးနေသောဖလင်သည် ဖြစ်နိုင်သည်။သဘောဃ နှင့်အလိုအလျောက်စက်ကိုရပ်သည်။
6. ရောင်စုံကုဒ်ခြေရာခံမုဒ်အောက်တွင် အမှား-ခံနိုင်ရည်ရှိသောနည်းပညာ၊ အရောင်ကုဒ်တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခု ပျောက်နေသဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည်။'ထုပ်ပိုးမှုကို မထိခိုက်စေပါ။
7.Batch ထိန်းချုပ်မှု၊ အမြောက်အများထုပ်ပိုးမှုအတွက်အဆင်ပြေသည်။
8. အိတ်ဆွဲမော်တာသည် Clutches မစတင်ဘဲ သီးခြားစီ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
9.Thermal Sealers များကို သီးခြားစီ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး စမ်းသပ်ရန် လွယ်ကူသည်။
10.ရွေးချယ်နိုင်သော အင်္ဂလိပ် သို့မဟုတ် တရုတ်ဘာသာစကား မျက်နှာပြင်
11. သန့်ရှင်းစွာစီစဉ်ထားသော လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်သေတ္တာ
12.အဝင်နှင့်အထွက်အခြေအနေအားလုံးကို LED တွင်ပြသထားပြီး၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီးထိန်းသိမ်းပါ။
13. အိတ်ဟောင်း၏ ရှေ့တုန်ခါမှုကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး P တစ်ခုကို ချွေတာနိုင်သည်။နီးစပ်မှုပြောင်းပါ။
14.Data auto saved
ယခင်- 100-500ml ဂျယ်/ငံပြာရည်/ရေ/အရည်ချောင်း ထုပ်ပိုးအိတ် အိတ်ထုပ်ပိုးစက် စျေးနှုန်း
နောက်တစ်ခု: အလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက် 1-8 အမျိုးအစား ဗီတာမင်ဆေးပြား / သကြားလုံး / နို့တက်ဘလက်များ / ဂျယ် / ဆေးတောင့် ရေတွက်ခြင်း ထုပ်ပိုးခြင်း စက်
VFFS soft gel/capsule ဒေါင်လိုက်အိတ်အထုပ်တစ်ထုပ်...
နှစ်ဆဖြင့် Granule နှင့် Powder Packing Machine...